Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Air Kiribati dia manaparitaka $ 243 tapitrisa amin'ny fiaramanidina vaovao
Embraer dia nanambara ny fanaovan-tsonia fifanarahana nifanaovana tamin'ny Governemantan'i Kiribati, miaraka amin'ny kaompaniam-pirenen'izy ireo, Air Kiribati, ho an'ny baiko roa hentitra ho an'ny E190-E2 E-Jets sy zon'ny mividy roa ho an'io maodely io ihany. Amin'ny fampiharana ny zon'ny mividy rehetra, ny fifanarahana dia mitentina USD 243 tapitrisa, mifototra amin'ny vidin'ny lisitra ankehitriny. Ny baiko dia hampidirina ao amin'ny backlog ampahefatra faha-efatra an'i Embraer's 2018.
Voalahatra ho amin'ny fandefasana ny taona 2019, ny E190-E2 dia hahafahan'ny mpitatitra saina ho an'ny Repoblikan'i Kiribati, miorina ao afovoan'ny Pasifika, hanidina amin'ireo lalana anatiny sy iraisampirenena lavitra kokoa noho ny amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo andian-tsambo misy azy io. Air Kiribati no ho mpandraharaha fandefasana ho an'ny E190-E2 ao amin'ny faritr'i Azia Pasifika (tsy misy an'i Sina). Ity baiko ity dia tonga taorian'ny fitsidihan'i Asia Pacific nandritra ny telo herinandro ny «Shark» livery E190-E2 tamin'ny volana oktobra, izay nahitana fijanonana tao Tarawa, renivohitr'i Kiribati. Mandritra ny faritra efatra ary ahitana nosy 30 mahery, Kiribati no firenena tokana eto amin'izao tontolo izao ao amin'ireo hemispera efatra.
"Miarahaba antsika mianakavy Air Kiribati ho an'ny fianakaviana Embraer ary hiara-hiasa akaiky amin'ny zotram-piaramanidina izahay rehefa hifindra amin'ny E190-E2 amin'ny alàlan'ny fonosana fidirana an-tserasera sy ekipa mpanohana kilasy eran-tany ao amin'ny faritra izahay," hoy i Cesar Pereira, Filoha lefitra Azia Pasifika, Embraer Commercial Aviation. “Ny manidina any Pasifika, ambonin'ny rano be dia be, dia mitaky halaviran-dàlana, fampisehoana ary fahaiza-mitondra entana betsaka. Ny safidin'ny Air Kiribati an'ny E190-E2 dia mbola fanamarinana iray hafa amin'ny drafitra jet iray mandeha an-tokana mandaitra indrindra eto an-tany, izay mihoatra ireo fepetra takiana ireo ary hahafahan'ny zotram-piaramanidina hanatsara ny fahita matetika amin'ny sidina ary hanamafisana ny tamba-jotra. ”
"Nahagaga anay ny zavatra hitanay rehefa nitsidika an'i Kiribati tamin'ny volana Oktobra ny E190-E2," hoy i Hon. Willie Tokataake, minisitry ny fampahalalam-baovao, ny fifandraisana, ny fitaterana ary ny fampandrosoana ny fizahantany ao amin'ny governemanta Kiribati. "Raha jerena ny halavirana mahavariana, ny vidin'ny solika ambany sy ny fikojakojana ary ny fikirakirana kilasy roa izay mitondra fampiononana ho an'ireo mpandeha raha ampitahaina amin'ny mpiara-miasa aminy, ny fahaizan'ny E190-E2 dia manome hery anay hanatsara ny fifandraisana eo amin'ny firenentsika sy ny any ivelany, hitondra ny firenentsika amin'ny dingana manaraka ny fitomboana. ”
Miaraka amin'ny halavirana hatramin'ny 2,850 kilometatra an-dranomasina, ny E190-E2 dia afaka miasa manerana ny habakabaka Kiribati, ao anatin'izany ny Tarawa mivantana mankany amin'ny Nosy Kiritimati (Noely), iray amin'ireo làlana sarotra indrindra any Pasifika. Ny fifandraisana an-tokantrano ankehitriny avy any Tarawa mankany Kiritimati dia misy fijanonana iraisam-pirenena ao Fiji.
Ny E190-E2 dia ao anatin'ny fianakavian'ny fiaramanidina E-Jets E2 an'ny Embraer vaovao, izay afaka mipetraka eo anelanelan'ny 70 ka hatramin'ny 150 ny mpandeha. Ny E190-E2 manokana, dia afaka mipetraka hatramin'ny 114 mpandeha, ary izy no mpikambana voalohany amin'ny fianakavian'ny fiaramanidina E-Jets E2 niditra tamin'ny fanompoana tamin'ny volana aprily 2018.
Embraer dia teo amin'ny faritra hatramin'ny nanaterana ny Bandeirante voalohany tamin'ny 1978 tany Aostralia ary nanome fanampiana sy serivisy feno nandritra ny taona maro ho an'ireo fiaramanidina monina any Aostralia sy any amin'ny faritra Pasifika.
Ny filaminana sy ny filaminana no laharam-pahamehana ho an'i Jamaika